प्रधानमन्त्री ओलीले आजै सुरक्षा परिषद्पछि बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक, के छ तयारी ? - Media Dabali
मंगलवार, फाल्गुण २५ २०७७Mar 09 2021
त्यो ‘नेकपा’ नै नरहेपछि बामदेव गौतमको यस्तो निर्णय, एमालेमा के गर्छन् ?
अख्तियारमा हर्ताकर्ता बनेपछि प्रमुख आयुक्त प्रेम राईको यस्तो घोषणा
सूर्य चिह्न खोस्न गएका प्रचण्ड आफैं ‘भष्म’ ! यी पूर्व माओवादीहरू ओलीमै विलय, चौतर्फी घाटा
भारतीय कम्पनीले ब्राजिललाई २ करोड डोज कोभिड खोप आपूर्ति गर्ने
माधव नेपाल एमालेमै फर्किने भएपछि केपी ओलीको आकस्मिक बैठक, के छ रणनीति ?
अनिश्‍चयबीच भएको भारत-पाकिस्तान युद्धविरामले नयाँ आशालाई पुनर्जीवित गर्‍यो : ईएफएसएएस
एमालेमा केपी ओली र सन्ध्या तिवारीको कुरो मिल्यो, यस्तो रहेछ सेटिङ
ओलीसँग सहमति गरेर प्रचण्डमाथि जाई लागे विप्लव !
# प्रेमबहादुर आले
# अग्नि सापकोटा
# बिना मगर
प्रधानमन्त्री ओलीले आजै सुरक्षा परिषद्पछि बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक, के छ तयारी ?
काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकपछि मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका छन् ।
आज मंगलवार बिहान ९ बजे बस्ने गरी परिषद् बैठक बोलाइएको छ । परिषद् बैठकमा देशमा विकसित पछिल्ला घटनाक्रम र सुरक्षाका विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक सकिएपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठक १० बजे बस्ने गरी सूचना आएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सर्वोच्चमा परेको रिटको फैसलालाई मध्यनजर गर्दै आजै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बोलाइएको छ । सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दाको फैसला १–२ दिनभित्रै सुनाउने तयारी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् रहने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । सदस्यमा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्यसचिव र प्रधानसेनापति रहने व्यवस्था रहेको छ ।
ओली सरकारबाट यी ६ जनाले पाए नयाँ नियुक्ति
पद पाएको २ महिनामै यी मन्त्रीको ठूलो घुसकाण्ड पर्दाफास, राजीनामा दिन तयार !
प्रचण्ड नेकपामा ठूलै विद्रोह, केपी ओलीतिर लागिन् यी महिला सांसद !
कांग्रेस सांसदहरूलाई पार्टीको कडा निर्देशन, भित्रभित्रै यस्तो भयंकर तयारी
नेकपाभित्र यी ३ सांसद निर्णायक : अन्तिममा ओलीतिर कि प्रचण्डतिर ?
झापामा एक्लै जित्यो कांग्रेसी प्यानल, ओली–प्रचण्ड मिल्दा समेत नेकपाको लज्जास्पद हार !
ओलीसँग मिल्न हिँडेका विप्लवलाई झट्का, माणिक लामासहित पाँच सयले हतियार नबुझाउने
कांग्रेसको विरोध थाम्नै नसकेपछि सभामुख सापकोटाले गरे यस्तो घोषणा